Orinasa fanaovana famonoana vita amin'ny marbra poloney - Mpanamboatra kristaly vita amin'ny marbra China, mpamatsy
Crystallizer poloney marbra MR2
MR2 dia vokatra fikojakojana marbra malaza amin'ny famerenana amin'ny laoniny indray ary fikojakojana isan'andro ny sehatry ny tany. Izy ireo dia afaka manamboatra haingana ny akanjo ivelany ary mampitombo ny famirapiratry ny tampon.
Crystallizer poloney marbra MR3
MR3 dia vokatra fikarakarana marbra nohamafisina ampiasaina amin'ny famolavolana crystallizing sy polishing marbra. Izy io dia afaka mamerina amin'ny laoniny haingana ny gloss amin'ny marbra, manatsara ny hakitroky ny atiny ary mahatohitra fanoherana. Ampiasao matetika ny MR3 hitazonana ny gorodona vita amin'ny marbra manampy amin'ny fanamboarana ny gorodona amin'ny marbra efa tonta, hamerina ny famirapiratanana ary hanatsara ny mazava.
MR5 dia vokatra fikolokoloana gorodona vita amin'ny marbra ho an'ny famerenana amin'ny laoniny na fanamafisana ny marbra. Izy io dia afaka manamboatra haingana ireo rakotra niforona teo amin'ny marbra tamin'ny alàlan'ny fitafiana, famerenana na fanatsarana ny famirapiratry ny tany.
Dingana iray Crystallizer spray N 'BUFF -2501
2501 dia crystallizer kilasika avy any NCL, novolavolaina ho tsotra hampiasa ny rafitra famerenana amin'ny laoniny ho an'ny marbra, terrazzo ary famolahana vatosokay vatosokay. Crystallizer Spray N 'BUFF dia mamokatra poloney avo be. Ny faritra vao naverina tamin'ny laoniny dia hanohitra ny scuffs sy ny scratches. Ity faritra tafaverina amin'ny laoniny ity dia haharitra be. Ny Crystallizer Spray N 'BUFF dia ritra rehefa mihinana ianao ary tsy mila fanadiovana mikorontana.
Crystallizer ho an'ny gorodona marbra sy terrazzo –AGUILA CR-2
Ny CR-2 - Sealer-crystallizer ho an'ny gorodona marbra sy terrazzo dia manome hazavana avo lenta maharitra sy mahatohitra, mitazona ny gorodona voaisy tombo-kase ary voaro mandritra ny fotoana maharitra.
Crystallizer ho an'ny gorodona marbra sy terrazzo –AGUILA CR-2T
Ny CR-2T - Sealer-crystallizer ho an'ny gorodona marbra sy terrazzo dia manome hazavana avo lenta maharitra sy mahatohitra, mitazona ny gorodona voaisy tombo-kase ary voaro mandritra ny fotoana maharitra.
Item KLEEVER K2 KLEEVER K3 Fisehoana ranon-javatra mena ranon-javatra mena 5L 5L fonosana 3CANS / CTN 3CANS / CTN Fampiharana: Marbra Marbra